Liverpool oo Xiiseeneysa Denis Zakaria oo ka tirsan Borussia Monchengladbach
Home Horyaalka Germalka Liverpool oo Xiiseeneysa Denis Zakaria oo ka tirsan Borussia Monchengladbach
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Monchengladbach Denis Zakaria .
24 jirkaan ayaa ku dhibtooday inuu qaab ciyaareed sarre ku soo bandhigo xilli ciyaareedkan sababo la xiriira dhaawac jilibka ah oo uu ka soo kabsaday bishii November, laakiin wuxuu cadeeyay muhiimada uu u leeyahay Monchengladbach tan iyo markii uu yimid 2017.
Sikastaba, Zakaria ayaa haatan waxaa uga harsan wax kayar 18 bilood oo uu kula sii joogi karo qandaraaskiisa haatan ee kooxda kula tartameysa Champions League waxaana la fahamsan yahay inuu diiday dalabkii kooxda ee qandaraaska cusub.
Sidaas darteed, wargayska Jarmalka ka soo baxa ee Bild ayaa sheegaya in Zakaria ay u badan tahay inuu xagaaga aadayo albaabka laga baxo, Liverpool-na waxay ka mid tahay kooxo dhowr ah oo xiisaynaya laacibka reer Switzerland.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa halis ugu jirta inay waayi doonto Georginio Wijnaldum dhamaadka xilli ciyaareedkaan, laakiin si ay u helaan Zakaria, waxaa lagu soo waramayaa inay ku garaaci doonaan saxiixiisa kooxaha Atletico Madrid iyo Manchester City .
Monchengladbach ayaa xaqiijisay saxiixa 19-jirka khadka dhexe ee kooxda Toulouse Kouadio Kone bishii Janaayo, taasoo suurta gal ka dhigeysa bixitaanka Zakaria xagaaga.
Previous articleReal Madrid oo dooneysa daafaca Kooxda RB Leipzig ee Dani Olmo
Next articleBorussia Dortmund oo qorsheyneysa inay iska iibiso Jadon Sancho xagaagan